Al-Shabaab oo soo bandhigay hubkii iyo gaadiidkii ay ku qabsadeen weerarkii deegaanka Cammaara [Sawirro]. – Somalimirror.net
Sawirada qaar sooma gudbin karo sababtoo ah waxaa lagu arkayaa askar si ba’an loo xasuuqay oo daadsan gudaha iyo hareeraha xerada.
Sawiro dheeraad ah Guji halkaan.
Previous PostSarkaal sare oo kamid ahaa ciidamada dowlada ee ku sugan degaanka Camaara ayaa dhaawac ka soo gaaray u dhintay.
Next PostCaawa waa Habeenkii guusha,